म धरानमा आएर संगत गरेका मेरा अग्रजहरुमध्ये मेरो मानस पटलमा सम्झना आइरहने व्यत्तिहरु मध्ये आदरणिय स्वर्गिय दाजु शंकरप्रसाद आचार्य पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँको स्वर्गवास भएको दिन आज एकवर्ष पुग्यो । वार्षिक पुण्य तिथिमा उहाँका परिवारजन, कुलकुटुम्ब, ईष्टमित्र, छरछिमेकी जम्मा भएर उहाँहरुको परम्परा सँस्कृति अनुुसार पितृ कार्य उहाँको घरमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । आज भन्दा दुई चार दिन अगावै औजारकै काममा म उहाँको घरमा गएको थिए । हामी प्रत्येक शनिबार शब्दालय भन्ने स्तम्भ औजारमा प्रकाशन गदै आईरहेका छौ । त्यो स्तम्भबारे प्रशंगवस भाउजु र मेरो विच कुराकानी भयो । भाउजुले स्वर्गिय दाजुप्रति उहाँका मनमा जबर्जस्त प्रश्नहरु भएर उछालिएका भावनाहरु उभिएरै कवितात्मक लयमा मलाइ सुनाउँदै जानुभयो मैले त्यहि भएको एक पाना कपि टिपेर उहाँको भनाई टिप्दै गए । उहाँले सुनाएका शब्दहरुले मलाई कताकता असजिलो बनाउदै थियो यस्तैमा थरर भाउजुका ओठहरु काँपे र आखाँबाट बरर आँशु झरे । केहि सेकेन्ड म अवाक भए । हतपत्त म समालिए र भाउजुलाई उहाँका भावत्नात्मक कविता पुरा गर्न सहजिकरण गर्ने प्रयत्न गरे । उहाँ पनि सम्भालिनु भयो, सबै हरफ मैले टिपे आजको स्तम्भमा उहाँका ति कविता प्रकाशन पनि भएको छ ।
म आफ्नो कार्यलयमा आएर स्वर्गिय शंकरप्रसाद दाजुप्रति अनेकौ कोणबाट स्मरण गरे । भाउजुका कवितालाई बुझिने अक्षरमा लेख्न बसँे । भाउजुलाई रुनु हुँदैन भनेर सम्झाई बुझाई गर्ने प्रयत्न त्याहा मैले गरेको थिए । तर भाउजुका कविता बुझिने अक्षरमा लेखि कम्प्युटरमा पठाउने भनि लेख्दै जादा भाउजुका भावले मलाई पनि आशु झार्न बाध्य तुल्यायो । म एक्लै मेरो कोठाको टेवलमा लेख्दै थिए । आँखाबाट आँशु झर्दै गए । फेरी सम्हालिदै स्वर्गिय दाजुको वार्षिक पुण्य तिथिमा शब्दद्वारा उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दे भाउजु इन्दिरा आचार्य सहित सबै परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु ।
स्वर्गिय शंकरप्रसाद आचार्य दाजुसित मैले २०४० सालदेखि संगत गर्दै आएको हो । मैले उहाँलाई भेट्दा उहाँले पढ्ने, लेख्ने काम सकेर राजनितिक जीवन यापन गर्दै यातायात व्यवसयिहरुको संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । म भने जागिर खाज्दै धरानको महेन्द्र क्याम्पस लेवलको अध्ययनमा थिए । उहाँ धरान शहरमा नै जन्मिनु भइ शहरी सँस्कृतिअनुसार हुर्की बढी भारतको विश्वविद्यालयमा पढाई सकेर राजनितिक जीवनकासाथ व्यवसायिक जीवन गुजार्दै हुनुहन्थ्यो । उहाँ र मेरो बीच कुनै पनि ढंगले संगै बस्ने संगै हिड्ने ढंगको स्तर थिएन । म महेन्द्र क्याम्पसमा पढ्दै धरान बसपार्कमा यात्रु बुकिङ काम गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिए । म बुकिङ जागिरे भएता पनि बिहान बेलुका उठबस, हिड्डुल गर्ने मौका स्व. शंकरप्रसाद आचार्य, स्व. मजदुर नेता छविलाल लम्साल, मजदुर नेता स्व. महेन्द्र बुढाथोकी, स्व. प्रेमकुमार श्रेष्ठ, स्व. बासुदेवमान श्रेष्ठ लगायतका दाजुहरु सित निरन्तर प्राप्त गर्दै आए । म आफ्नो काममा कटिबद्ध थिए । पहाडे केटो, सोझो, ईमान्दारका रुपमा उहाँहरुले मलाई हेरिरहनु भएको मैले महशुस गरेको थिए । म पनि महेन्द्र क्याम्पसको अनेरास्ववियुको विद्यार्थि संगठनको कार्यकर्ता हो भन्ने उहाँहरुले मलाई बुझेपछि म प्रति अझै धेरै माया, स्नेह दिन थाल्नुभयो मैले उहाँहरु प्रति आदर सम्मान गर्न कहिल्यै छुटाइन । यो ढङ्गको हाम्रो सम्बन्धका कारण तिसौ वर्ष भन्दा बढी उहाँहरु सबैसित मेरो सम्बन्ध हार्दिकता एवम् भावनात्मक रह्यो । उहाँहरुको परिवारको एक सदस्यका रुपमा म सधै रहे । स्वर्गिय दाजु शंकरप्रसाद आचार्यको वार्षिक पुण्य तिथिमा अरु स्वर्गिय दाजुहरुलाई पनि भावपुर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
मानिसको पुर्नजन्म हुन्छ वा हुन्न ? भन्ने सवालमा व्यापक बहस भएको सुनिन्छ । यसको धार्मिक तथा बैज्ञानिक तर्कहरु आ–आफ्ना ढंगबाट प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । मेरो व्यतिगत बुझाईमा पुर्नजन्म हुन्छ । केही उदाहरणहरुबाट मानिसको जन्म पटक पटक हुँदो रहेछ झै मलाइ लागिरहेको छ । स्वर्गिय आदरणिय दाजु शंकरप्रसाद आचार्यकी ठुली छोरी हालमा अमेरिका बस्छिन् । उनको नाम तृष्णा आचार्य हो । छोरी तृष्णा नानि जस्तै धेरै नेपाली अमेरिकामा डिभि पारेर गएका हामी सबैलाई थाहाँ छ । त्याँहा जानेहरु धेरैले विभिन्न कलकारखानामा मजदुरी गर्छिन् भन्ने सुनिन्छ । यि तृष्णा नानी भने अमेरिकामा नै गएर पढाइ लेखाई सकेर त्याँहाका शिक्षित नागरिक सरह जीवनयापन गर्दे आईरहेकी छिन् । माइली छोरी डाक्टर मिरा आचार्य कोशि अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत छिन् । छोरा प्रशान्त आचार्य एयरक्राफ्ट ईन्जिनियरमा कार्यरत छन् । कान्छि छोरी प्रतिभा आचार्य शिक्षण पेशामा व्यस्त छिन् । यहाँ भतिज प्रशान्त छोरी नानिहरुको नाम मैले उल्लेख गर्नका कारण होकी स्वर्गिय दाजु शंकरप्रसाद आचार्यको बोलाई, चलाई, आवाज, बिचार, संस्कार सबै गुण यि नानिहरुमा मैले पाइरहेको छु ।
स्वर्गिय शंकर दाजुको तस्बिर जो आजको प्रशान्त बाबुको उमेरको समयको तस्बिरसंगै राखेर हेर्ने हो भने कुन तस्विर स्वर्गिय शंकर दाजुको हो अनि कुन तस्बिर प्रशान्त बाबुको हो भनेर नचिनेका मानिसहरुले छुट्याउन गाह्रो अनि कठिनाइ हुन्छ । शंकर दाजुको म प्रतिको सरसंगत सद्भाव भतिज प्रशान्त बाबुले घट्न दिएका छैनन् । यसकारण मानिसको जन्म त पटक पटक हुँदोरहेछ । मेरो बुझाई रह्यो । शंकर दाजु त कहिले तृष्णा नानि, कहिले मिरा नानि, कहिले प्रशान्तबाबु त कहिले प्रतिभा नानि भएर जन्मिएर हामिसँगै बसिरहनु भएझै उहाँलाई स्मरण गर्ने सिलसिलामा मलाई लाग्यो म आदर्णिय भाउजुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु की दाजु टाढा जानुभएको छैन । तपाई संगै रहनुभएको छ । अब मन बलियो बनाएर यिनै पढेलेखेका शिक्षित नानिहरु, बुद्धिजिवि, असल सँस्कारबाट हुर्किएका छोराछोरीहरुसित रम्दै आउने दिनहरुको यात्रा तय गर्नुपर्दछ भाउजु हजुर । हजुरका बुहारी नानि सबै कुरा बुझ्ने अनि आफुभन्दा ठुलाको आदर कदर गर्ने सँस्कारबाट ओतप्रोत भएको मैले पाको छु, आदरणिय भाउजु हजुर म आउदा हजुर भक्कानिनु भयो म खासै कठोर मानिस होइन म त भावुक मानिस हो झै लाग्दछ ।
भाउजु हजुरको भावुक कविताबाट म पनि भावुक भए । आँशु झारे वास्तवमा स्वर्गिय दाजु त यहि हुनुहुदो रहेछ । मानिसको पुर्नजन्म हुदोरहेछ । ति जन्महरुका बारेमा बुझ्न सक्नुपर्दछ झै मलाई लागिरहेको छ । यस वार्षिक पुण्य तिथिमा स्वर्गिय दाजु अनि दाजुका सब परिवारबारे यसरी स्मरण गरे पुन स्वर्गिय दाजु प्रति भावपुर्ण श्रदाञ्जली सहितबिदा ।